Xulafada Sacuudiga oo soo dhoweeyey Cali Cabdalla Saalax oo dagaal kula jira Xuutiyiinta - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka STRINGRER
Hadal ay xulafadu soo saartay ayaa lagu sheegay in go'aankaas "uu yahay mid hogaanka qabanaya, lana safanaya rabitaanka dadka, Yemenna ka xoraynaya miliishiyada daacadda u ah Iiraan".
Mr Saalax wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay in "bog cusub la furo" haddii isbahaysigu uu qaado xannibadda, uuna joojiyo weerarrada.
Hogaamiyaha kooxda, Cabdulmaalik al Xuuti wuxuu Mr Saalax ku eedeeyey inuu jaal la ahaa Sacuudiga, arrintaasoo "uu ka shakisanaa balse iminka cadaatay".
"Waxaan ugu baaqayaa walaalaha iyo dalalka deriska ah iyo isbahaysiga inay joojiyaan weerarka, oo ay qaadaan hareereynta, ayna furaan garoomada dayaaradaha oo ay ogolaadaan in dadka la gaarsiiyo raashinka gargaarka iyo in la badbaadiyo kuwa dhaawacyada qaba, innaguna waxaan furi doonnaa bog cusub oo ku dhisan deris wanaag" ayuu ku yiri Mr Saalax Khudbad uu TV ka sii daayey.
Wuxuu intaa ku daray "si wanaagsan ayaan u tacaamuli doonnaa, waxa Yemen ku dhacaynna waa wax ku filan".
Wuxuu codsaday in 'dhinacyada siyaasadda oo dhan ay bog cusub furaan, lana sameeyo isbahaysi qaran oo sal ballaaran, kaasoo seeska u dhiga waayo cusub, dadka oo dhamina ay u midoobaan sidii looga hortegi lahaa miliishiyada inqilaabka samaysay'.
Xuutiyiintu way ku gacan sayreen hadalka Mr Saalax. Afhayeen u hadlay ayaa yiri 'khudbadda Saalax waa afgambi ka dhan ah isbahaysigii aan wada ahayn, waana mid dibadda soo dhigaysa khiyaanada ay wadaan kuwa sheegaya inay duullaanka ka soo hor jeedaan'.
Dagaalkan ugu dambeeyey ayaa qarxay Arbacadii, markii taageerayaasha Mr Saalax ay ku eedeeyeen fallaagada Xuutiyiinta inay jabiyeen dhismaha masjidka magaalada ugu weyn